China Black Door Handle Lock Lock abantwana Igumbi Ukwenziwa kunye Factory | YALIS ukuhambelana namazwi
Isitshixo esiMnyama soMnyango esiValiweyo segumbi labantwana
Ukutyeba komnyango: 38-50mm
Ukugqiba okuqhelekileyo: umnyama omnyama
Kwintsapho, igumbi lokuhlambela yindawo esetyenziswa rhoqo. Nangona kunjalo, igumbi lokuhlambela ikwangoyena mmandla weengozi, kwaye iingozi ezinje ngokuwa kunye nokuqubeka kwenzeka amaxesha ngamaxesha. Amalungu osapho (ngakumbi abantwana kunye nabantu abadala) ngokungazi bazivalela kwigumbi lokuhlambela, bahlala benobungozi obukhulu kukhuseleko.
Ukusuka kwimbono yobuntu, ukhathalelo lwe-YALIS ukuya kwindawo yobuhlungu yomthengi ngamnye ngokusondeleyo, ulandela iimfuno zentengiso, kwaye aqalise uthotho lwesitshixo somnyango wokuhlambela. Isitshixo sokuphatha ucango lwangasese sinokuvulwa ngokulula ngaphandle ukunqanda iingxaki ezinje ngabantu abadala kunye nabantwana ekutyibilikiseni nasekuweni kwigumbi lokuhlambela kwaye bangakwazi ukubahlangula kwangexesha. I-YALIS yangasese yokuphatha iqhaga lokuphatha izakuzama ixesha elininzi lokukhusela usapho lwakho.
I-YALIS isidlulisile isatifikethi seshishini lobuchwephesha, isatifikethi solawulo lomgangatho we-ISO9001, isatifikethi seSwitzerland SGS, isiqinisekiso seTUV saseJamani, isatifikethi se-EURO EN, kwaye sinamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphezu kwe-100 kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Ukusuka kukhetho lwezinto, ubugcisa, ulawulo lomgangatho, kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, sizabalazela ukugqibelela. Injongo ye-YALIS kukubonelela abathengi ngeseti yezisombululo ezifanelekileyo, ezilula nezilungile zeminyango yezixhobo. Ngo-2021, i-YALIS iya kuqhubeka nokuthatha "ukuthembeka kunye nokuyila" njengeyona nto iphambili yenkampani, iqhubeke nokwenza nzulu uhlengahlengiso, kwaye izise izibambo zeminyango ye-YALIS kuwo wonke umhlaba ukusebenzela amawaka abathengi.
Egqithileyo Matt Black okungangenwa Door Handle Tshixa
Okulandelayo: Ukuphathwa kwabantwana emnyango woKhuseleko kwigumbi labantwana
Umnyango weSango lokuhlambela
Tshixa kwigumbi lokuhlambela Handl
Handle emnyango emnyango
Hower Door Handle
I-Chrome Standard Door Lever Lock
Handle emnyango Ingcango Nge Latch Tshixa
Umjikelo oMnyama woKhuseleko loMntwana kuHamba ngeTshixo
Matt Black okungangenwa Door Handle Tshixa
Ubumfihlo Bokubamba Ingcango Yokutshixa Iminyango Yangasese